डाकाको ४ गोल! | Hamro Khelkud
डाकाको ४ गोल!
एजेन्सी – जाम्बियाका युवा फरवार्ड प्याटसन डाकाले ४ गोल गरेपछि इंग्लिस प्रिमियर लिग क्लब लेस्टर सिटीले युरोपा लिगको समूह चरणमा स्पार्टाक मस्कोमाथि रोमान्चक जित दर्ता गरेको छ । खेलमा २-० ले पछि परेको अवस्थामा डाकाले ९ मिनेटको अन्तरमा ह्याट्रिक गर्दै टोलीलाई ४-३ को जित दिलाएका थिए ।
घरेलु टोली स्पार्टाकले खेलको ११ औं मिनेटमा एलेक्जेन्डर सोबोलेभ र ४४ औं मिनेटमा जोर्डन लार्सनको गोलमा अग्रता लिएको थियो । पहिलो हाफको अन्त्यतिर डाकाले केलेची इहेनाचोको पासलाई सदुपयोग गर्दै स्कोर २-१ बनाए । दोस्रो हाफको सुरुवातमै डाकाले सानदार प्रदर्शन गरेपछि लेस्टरले अग्रता लिएको थियो ।
दोस्रो हाफको ४८ औं मिनेटमा इहेनाचोको पासमा गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए । उनले त्यसको ६ मिनेटपछि नै युरी टिलेमान्सको पासमा गोल गर्दै आफ्नो ह्याट्रिक पूरा गरे । उनी युरोपेली प्रतियोगितामा ह्याट्रिक प्रहार गर्ने पहिलो जाम्बियन खेलाडी बने । ९ मिनेटको अन्तरमा ह्याट्रिक पूरा गरेका डाकाले ७८ औं मिनेटमा चौथो गोल गरे । स्पार्टाकले ८६ औं मिनेटमा सोबोलेभको गोलसँगै खेलमा फर्कने संकेत देखाएपनि इंग्लिस टोलीले जित पक्का गर्यो ।
यस जितसँगै लेस्टरले समूहमा पहिलो जित दर्ता गरेको छ । टोलीको ३ खेलमा ४ अंक छ । शीर्षस्थानको लेजिया वार्साको २ खेलमा ६ अंक छ । स्पार्टाक ३ अंकसहित तेस्रो तथा नेपोली १ अंकसहित पुछारमा छ । आज लेजिया र नेपोली खेल्नेछन् ।